Laanta socdaalka: Qofkii marka hore la siiyo diidmo rajadiisa weey yar tahay in la ogolaado markale | Somaliska
Laanta socdaalka: Qofkii marka hore la siiyo diidmo rajadiisa weey yar tahay in la ogolaado markale
Inta badan dadka la siiyo diimo marka ay magangalyo weeydiistaan dowladda waxaa hadana aan caadi aheyn in markale la aqabo codsigiisa sababo la xirriira go’aanka laga qaatay oo sameeyn ku yeesha. Rajadana waa 5% (shan boqolkiiba) marka loo eeggo lix sanno ka hor oo ay rajada qofka ka qabo in markale dib loo furo kiiskiisa lana siiyo sharci ay aheyd 60% (lixdan boqolkiiba).
Hadaba ninka lugu magacaabo Taarik Alam oo asalkiisu yahay Bangaladeesh ayaa ka mid ah dadyooowga quus ka qaba in la siiyo sharcigga sababo laxirriira diidmo hore oo uu qabay. Taarikh oo u waramayey warbaahinta maxaliga ah ayaa sheegay inuu yahay nin qaniis ah (laga roone) dadkiisuna ay og yihiin, haddii dib loogu celiyana dalkiisa la dilayo.
Waxaa uu dalkaan yimid sanadkii 2011-kii, sanad ka dibna waxaa loo diiday inuu helo magangalyo.Sidaana ka mid noqday dadyow badan oo dalka si sharci darro ah ku joogga. Waxaa uu rajo ka qabaa in markale dib loo furo kiiskiisa lana siiyo magangalyo. Balse laanta socdaalka ayaa tiro koob ay saartay waxaa ay tibaaxeeysa in rajadiisa ay aad u yar tahay. Sanadkii 2011-kii 60% (lixdan boqolkiiba) dadkii la siiyeey diidamadda iyo amarka ay dalka kaga baxayaan, waxaa ay mar-kale dalbadeen dib u eeggis lugu sameeyo codsigooda magangalyo. Saas oo ay tahana waxaa nasiibka u saamaxaa tiro aad u yar in ay helaan sharci. Sanadkan oo keliya ayaa 5% (shan boqolkiiba) ama hal labaatankii qof waxaa la siiya sharci.
Christina Ström, waa qabiir ka tirsan laanta socdaalka, wuxuu sheegay in isbadaladan adag ay ugu wacan tahay maxakamadaha laanta socdaalka oo gaaray goaano badan oo adkeeynaya in si sahal ah dalkaan looga helo sharci ku joog. Taasina waxeey keenta in dalka lugu dhex dhuunto.
Dhinaca kale Taarik wuxuu rajo ka qabaa in laanta socdaalka ay qiimeyn kale ku sameeyso xaaladiisa oo ay siiso sharci uu ku joog dalka. Wuxuu sidoo kale sheegay in xitaaa haddii markale la diidmo aannu diyaar u aheyn in uu ku laabto dalkiisa, oo uu qarka u saaran yahay in la dilo. Ugu dambeyntii wuxuu sheegay in noloshiisa uu maareeyo isagoo u shaqeeya sharkadaha nadaafadda qaabilsan bishiina ay soo gasho lix kun shaqeeyna mararka qaar in ka badan 11 saacadood.
“Haddii markale la i qaabili waayo, waxaan dalbanaya sharciga shaqo mana doonayo inaan ku laabto Bangaladeesh” ayuu yiri Taarik. Dalkaan Iswiidhan ayaa waxaa ku nool dadyow aad u faro badan loo diiday sharci ku jooga dalka, waxaana in badan oo ka mid ahi ay ku dhuumaaleeysanayaan dalka.
Daladda u dooda mideynta qoysaska Soomaalida oo kulan la yeelatay wasiirka Socdaalka Sweden
Stefan Löfven: “Suuragal maahan in Hangari diido heshiishyaddii Midowga Yurub”